Kedu ihe bụ ụtụ na mkpa ọ dị na hydrogeography | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-eme ọmụmụ ihe ọmụmụ banyere mmiri, anyị na-elebara njikọ nke ụfọdụ osimiri na ndị ọzọ anya. Na mbido, mgbe otu osimiri ma ọ bụ karịa batara, a na-ewere ya ka ụtụ osimiri ahụ nke na-adịchaghị mkpa. Agbanyeghị, nke a nwere ọtụtụ ndị ọzọ dịka anyị ga-ahụ n’isiokwu a niile.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ụtụ bụ na njirimara ndị a na-atụle mgbe akpọ aha osimiri nke bụ ụtụ nke ọzọ.
1 Kedu ihe bụ ụtụ
2 Olee otu esi ahazi ndị na-atụ ụtụ?
3 Gịnị bụ ihe na-agbapụta mmiri?
4 Nnyocha na ọmụmụ ihe
Mgbe otu osimiri ma ọ bụ karịa sonyere, a na-ewere nke pere mpe dị ka ụtụ. Otu ihe dị mkpa otu osimiri ma ọ bụ ọzọ dị na etu mmiri ahụ si asọ, ogologo ya ma ọ bụ n’elu ya. Onye nwere ntakịrị mmiri, ogologo ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ pere mpe ga-abụ ụtụ na nkwụsị mmiri. Otú ọ dị, ọ naghị adịkarị otú ahụ. Anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe atụ dịka Osimiri Mississippi, onye ụtụ ya bụ Osimiri Missouri na ọ dị kilomita 600 n’ogologo ma nwee efere okpukpu atọ n’ogologo.
Anyị na-ahụkwa osimiri Miño na Narcea dị mkpụmkpụ ma na-erughị ala karịa ndị na-asọpụta ha, bụ́ Sil na Nalón. Ihe ndị a niile mere ka anyị hụ na ịdị mkpa nke mmiri na-abụkarị ihe na-egbu mmụọ, ya bụ, enweghị mgbagha a na-apụghị ịgbagha agbagha banyere osimiri bụ isi mmiri na nke bụ ụtụ ya.
Usoro eji egosi tributary n'ihe gbasara isi iyi a na - abụkarị: aka ekpe ma obu osiso aka nri N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmata akụkụ nke osimiri dị ntakịrị mkpa na-esonye na nke ka ukwuu. Ihe okwu ndị a na-akọwa, site na mmiri nke ọ nyere, mgbada dị larịị n'ihe metụtara ụzọ mmiri iyi na-asọ.
Olee otu esi ahazi ndị na-atụ ụtụ?
Mgbe anyị na-ekwu maka otu nnukwu mmiri na ọwara mmiri ya niile, anyị kwesịrị ịwepụta site na ndị kacha nso na isi iyi nke osimiri na ndị kacha nso ọnụ.. A na-ahazi ha n'usoro ndị isi. Anyị nwere usoro izizi, usoro nke abụọ na nke atọ. Tribgbụ ụtụ izizi nke mbu pere mpe. Usoro nke abuo bu nke nwere uzo abuo ma obu karie nke soro usoro mbu ma jikọta ya. Usoro nke atọ bụ nke kachasị mkpa na nke kachasị ukwuu.
Zọ ọzọ iji nye iwu ma hazie iyi ndị dị n’osimiri bụ site n’ọnụ ya ruo n’isi ya. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enye ya nhazi dendritic. Morezọ bara uru karị iji usoro abụọ a bụ kee ha n'akụkụ: iyi nke na-esite n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri wee ruo ogologo oge isi ha ma ọ bụ isi mmalite ha dị n'ọnụ ọnụ mmiri bụ isi. Nke a bụ ụzọ e si ekewa ndị na-asọ asọ nke metụtara mmiri asymmetry nke osimiri na njikọta nke mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa. E nwere ụfọdụ osimiri na-asọba n’obodo ukwu mgbe ha gachara njem dị anya.
A na-ekwukarị na isi iyi na-amalite site n'ugwu wee kwụsị n'oké osimiri. Nke a ekwesịghị ịdị mgbe niile. N'ihe banyere osimiri ndị na-asọba nke ndị ọzọ, anyị na-ahụ na ọnụ anaghị akwụsị n'oké osimiri kama ọ na-aga n'osimiri ọzọ na-asọba. Ọ na-ahụkarị ịhụ osimiri ndị dị na mgbago ugwu nke nnukwu akụ ha dị n'aka ekpe ma jiri ọnụ ha rụọ ọrụ nke ọma. Imirikiti osimiri ndị na-asọ mmiri nke ọzọ site na akụ ziri ezi na-eme ka ọ dị mma mgbe niile. Ihe niile ewepụrụ bụ maka njirimara nke enyemaka.
Gịnị bụ ihe na-agbapụta mmiri?
Dị nnọọ ka anyị si kọwaa ihe ọpụpụ bụ, anyị ga-ekwurịrị ihe ọpụpụ bụ. Ọ bụ kpọmkwem ihe megidere ya. Ọ bụ ihe okike ma ọ bụ ntụgharị aka nke na-esi na isi iyi dị ugbu a nke nnukwu osimiri gafere site na obere. N’ọnọdụ ka ukwuu, mgbe mmiri sitere n’okwute pụta, ọ na-adị n’ebe dịdebere osimiri delta. Enwekwara ikpe nke, n'ihi enyemaka, ọ nwekwara ike ime n'akụkụ ndị ọzọ nke osimiri ahụ. Examplesfọdụ ihe atụ nke ha bụ osimiri Casiquiare n'ihe gbasara Osimiri Orinoco.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị bụ na isi ihe sitere na mmiri sitere na mmiri iji rụọ ọrụ ugbo na anụ ụlọ. Nke a na - emepụta ọwa maka mmiri na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ site na mmiri.
Nnyocha na ọmụmụ ihe
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ ga-abụ na Osimiri Amazon nwere ụfọdụ ndị na-asọba n'okirikiri ala apụtawo ìhè. Ogbu mmiri ndị a ga - amalite ọtụtụ afọ gara aga nke ga - aga kilomita. E nwere ihe omumu nke ndi oka mmuta mere na Brazil nke ruru na nkwubi okwu na otutu otutu otutu gara aga, enwere osimiri di n'okpuru ala nke ihe dika 6000 kilomita n'ogologo nke di otutu puku mita n'okpuruala.
A ga-eme omumu a n'ime olulu mmanu di iche iche nke ejiriworo kemgbe 70. Ekele maka ịkụpu ala egosila na enwere mmegharị 4000 mita n'okpuru osimiri. A na-akpọ osimiri a n'okpuru ugwu Hamza ma tinye ya na nsọpụrụ nke onye nduzi nke nyocha niile na na, n'aka nke ya, nwere ike ịbụ onye nyere echiche na enwere ike ịmegharị mmiri n'okpuruala. Ọ hụrụ iji gosi ịdị adị nke osimiri a na enwere ike ikwu ya hoo haa na mmiri zuru oke ọhịa Amazon na-eri mmiri site na mmiri abụọ: Osimiri Amazon na Osimiri Hamza.
Dịka ị pụrụ ịhụ, iyi ndị dị na mmiri ekwesịghị ịbụ obere obere, yana obere mmiri ma ọ bụ obere akaụntụ, mana kama ha dabere na ihe ndị ọzọ na-eme maka nke a. Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe gbasara ụtụ na mkpa ọ dị maka hydrogeography.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kedu ihe bụ ụtụ
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara enyemaka karst